Inkcazo yeCabozantinib Inkcazo yeCabozantinib yeMisebenzi yeCabozantinib Iziphumo ebezingalindelekanga Uphuhliso lwakutsha nje lweCabozantinib Cabozantinib Treatment Success Stories Isishwankathelo ICabozantinib Inkcazo yeCabozantinib (i-CAS: 849217-68-1) isetyenziselwa ukunyanga umhlaza wezintso oqhubela phambili, ngamanye amaxesha ngokudibana nelinye iyeza elibizwa ngokuba yi-nivolumab. I-Cabozantinib ikwasetyenziselwa ukunyanga umhlaza wesibindi kubantu ababekhe baphathwa nge-sorafenib. ICabozantinib isetyenziselwa […]
Yintoni u-Erlotinib? Usebenza njani u-Erlotinib? Zeziphi izifo ezenziwa ngu-Erlotinib? Usetyenziswa njani u-Erlotinib ngoku ekliniki? Ngaba abaguli banesifo esona sisebenzayo? Yintoni i-Erlotinib Resistance? Zithini iingozi ezinxulunyaniswa ne-Erlotinib? Zeziphi iziyobisi okanye iziSongezo ezinxibelelana no-Erlotinib? Isishwankathelo sonyango esamkelweyo se-FDA Yintoni […]
I-FDA ivuma i-dacomitinib ye-metastatic non-encinci cell cancer yamaphaphu Yintoni i-Non-Small Cell Lung Cancer? Isicelo seKlinikhi seDacomitinib kwisifo somhlaza esingeyonto incinci yemiphunga. I-FDA ivuma i-dacomitinib ye-metastatic non-encinci […]
Imbali yeLenvatinib Yintoni uLenvatinib? I-Lenvatinib Mechanism yesenzo Isebenziselwa ntoni i-Lenvatinib? Zeziphi iziphumo ebezingalindelekanga endinokuthi ndiziqaphele xa usebenzisa iLenvatinib? Iziphumo zeKlinikhi (Ukwamkelwa kwe-FDA) Ndifanele ukuyigcina phi i-Lenvatinib? Iziyobisi ezinxulumene noko: ILenvatinib Mesylate (CAS: 857890-39-2) Sinokuyithenga phi i-Lenvatinib kwi-Intanethi? Imbali yeLenvatinib A Inqanaba I Uvavanyo lwezonyango kwi […]
I-Ceritinib yavunywa ukuba isetyenziswe kwi-EU Inkcazo yeCeritinib Isebenza njani iCeritinib yokuNyanga i-NSCLC? Njani malunga nokuSetyenziswa kwezoNyango zeCeritinib? Ungayigcina njani iCeritinib (LDK378)? Zithini iziphumo ebezingalindelekanga zeCeritinib? Zeziphi ezinye izibonelelo zeCeritinib eziye zabonakaliswa kwizifundo? I-Ceritinib Ifumana i-FDA-Line First FDA Ukuvunywa kwe-ALK-Positive Lung Cancer Ceritinib Yamkelwe […]